WASHINGTON( HALBEEG)- Wasiirka garsoorka ee dalka Mareykanka Jeff Sessions ayaa ku dhowaaqay inuu banneeyay xilkii hoggaaminta wasaaradda ee uu hayay kadib markii uu cadaadis kala kulmay dhanka madaxweyne Donald Trump oo kal hore wasiirka kabaha la dul maray kuna eedeeyay in wasiir Jeff uu gacan bidixeeyay baaritaannada ku aaddan fara galinta Ruushka uu ku sameeyay doorashooyinkii dalka Mareykanka.
Shaqo ka tagista wasiir Jeff ayaa imaaday maalin kadib markii laga soo dhamaaday doorashooyinkii dhexe ee dalka Mareykanka kaasoo xisbiga jamhuuriga uu si weyn isugu fidiyay kuraasta golaha Senate-ka,halka xisbiga dimoqraadiga ahna ay faraha ka buuxsadeen kuraastii golaha shacabka .
Taariikhda dalka Mareykanka horay ugama aysan dhicin in madaxweyne talada haya uu eedeymo iyo dhaleeceyn joogta ah la daba kaco wasiir ka tirsan xukuumaddiisa sida imika kala qabsatay wasiir Jeff iyo madaxweyne Trump .
Jeff sessions oo 71 jir ah ayaa taageero lixaad leh u muujiyay madaxweyne Trump xilligii uu ku jiray ololihiisii uu ku doonayay hanashada hogaanka dalka.
Rug caddaayaasha siyaasadeed ee xisbiga Jamhuuriga ayaa in badan madaxweyne Trump kula taliyay inuusan xilka ka xayuubinin Sessions ka hor doorashooyinka dhexe ee Mareykanka iyaga oo ka gaashaamanayay in fallaaro iyo dharbaaxooyin siyaasadeed ay ku dhacaan xisbiga, sidoo kalena wasiir Jeff ayaa loo seeto dheereeyay kadib markii uu si weyn u taageeray siyaasadihii madaxweyne Trump ee ku aaddanaa soo galootiga.
Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegtay in madaxa shaqaalaha garsoorka uu sii wadi doono dhamaystirka howlaha qabyada ah ee wasaaradda horyaalla oo ay ka mid yihiin dabagalka lagu hayo fara galinta laga shaki qabo in Ruushka uu faragelin ku sameeyay doorashooyinkii madaxtinnimo ee dalka Mareykanka waxaana baariitaankaas hoggaamin doona Ropert Moller.
Thomas Bires oo ka tirsan xisbiga dimoqraadiga oo hadlay kadib is casilaadda wasiirka garsoorka ayaa yiri “ waa awood ku takri falid, waana halis weyn oo soo wajahday sharciga dalka Mareykanka”.
Sarkaal ka tirsan xisbiga dimoqraadiga ah ayaa isna sheegay in uu rajaynayo in is casilaadda wasiirka garsoorka aysan noqon mid lagu soo afmeerayo dabagalkii lagu hayay fara galinta laga shaki qabo in Ruushku uu ku sameeyay doorashooyinkii madaxtinimo ee dalka Mareykanka.